Hadii Aad Dooneysid Inaad Gabadha SRK Saaxiib La Noqoto Waa Inaad 7-Shuruud Kasoo Bixi Kartid
Bollywood King Khan gabadhiisa Suhana Khan haatan waxay noqotay qof caan ah oo saxaafada soo xigato sidoo kalena baraha bulshada sawiradeeda lagu arko. Sida darteed SRK ayaa ka dhawaajiyay inuu ka rabo 7-shuruud inuu … Read More »
Rasmi: Filimka Dangal Iyo Arbacadiisa Labaad Lacagaha Uu Keenay Iskoor Cusub Ayuu Sameeyay
Filimka Dangal ee hogaamiyaha ka yahay Bollywood Record Creator (Aamir Khan) ayaa iskoor cusub dhigay marka la fiiriyo lacagaha uu keenay arbacadiisa labaad. Dangal wuxuu arbacadiisa labaad keenay 9 Crore (Trade Figure) sida ay shabakada Boxoffice … Read More »
Sedexdii Atoore Iyo Sedexdii Atirisho Ee Bollywood-ka Ugu Awooda Badnaa Sanadii 2012
Kusoo dhawaada barnaamijkeenii taxanaha ahaa waxaana sii amba qaadi doonaa falanqeyntii aan ku wadnay awooda xidigaha Bollywood-ka. Dabcan 20-sano ayaan kasoo hadalnay sanad walbo sedexda atoore iyo sedexda atirisho ee Bollywood-ka ugu awooda badnaa. … Read More »
Boxoffice Power: Atoorayaasha Bollywood-ka Ugu Caansan Iyo Marka Ay Sameeyeen Hit-ka Ugu Badan Hal Sano Gudaheeda
Waxaan idiin heynaa warbixin rasmi ah oo sidoo kalena Update lagu sameeyay madaama 2016 dhawaan kasoo gudubnay waxaana laga hadlayaa atoorayaasha filimada Hit-ka ugu badan hal sano gudaheeda sameeyeen. Liiskaan atoore kasto iskama soo … Read More »
LAMAANAHII SAFARKA WADAAGAY QEYBTA 95-AAD
WIILKA LA NOOLAA SODOGTIISA QEYBTA 176-AAD
LAMAANAHII SAFARKA WADAAGAY QEYBTA 94-AAD
WIILKA LA NOOLAA SODOGTIISA QEYBTA 175-AAD
LAMAANAHII SAFARKA WADAAGAY QEYBTA 93-AAD
4	Joker Afsomali